4 wado oo aad ku maareyn karto gabadha masayrka badan | Raganimo University
February 6, 20192 minutes
Ma jirto gabadh iska masayrta sabab la'aan. Masayrka gabadha waxaa laga yaabaa in ay keentay xaalad shaki ku abuurtay. Ninka waxaa laga doonayaa in si degan uu isku dayo in uu fahmo sababta dhalisay masayrka gacalisadiisa. Ma waxay ka xumaatay in aad telefoonka kula hadashay gabadh kale? Ma hadal aad dhahday ayaa shaki ku abuuray?
Waligaa ha dhihin "waan kaa tagayaa ama waan ku furayaa haddii aadan masayrka joojin." Waxay u badantahay in ay hadalkaaga u qaadan doonto in aad door bidayso in aad ka tagto halkii aad ka qiran lahayd in aad qalad gashay ama xal u raadiso shakiga ku jira. Xitaa haddii aad go'aansatay in aad soo afjarto xiriirkiina, waligaa haku dhihin waan kaa tagayaa haddii aadan sidaa samayn. Dadku cadaadiska xal kuma gaaraan ee waa ay ka sii daraan.